Kỹ thuật trồng cây xương rồng bát tiên | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Kỹ thuật trồng cây xương rồng bát tiên | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Iintyatyambo ezintle zeTet
1 Ulwazi olusisiseko malunga neentyatyambo ze-fairy cactus ezisibhozo
1.1 1. Iingqayi zezityalo:
1.1.1 Umhlaba wokukhulisa i-fairy cactus esibhozo
1.2 2. Ukhula njani i-fairy cactus esibhozo
1.2.1 3. Ukwenza imbiza:
1.2.2 4. Khulisa i-fairy cactus esibhozo
Ulwazi olusisiseko malunga neentyatyambo ze-fairy cactus ezisibhozo
Ekuqaleni, kufuneka senze imeko yemozulu ibe kufutshane nemozulu yantlandlolo, ngokuthe ngcembe siqhelana nemozulu, imozulu yokusingqongileyo kwindawo esikhulela kuyo, oko kukuthi ngokuthe ngcembe ufuye umthi weBat Tien ngokwemozulu yaseVietnam. ecaleni kwendlela yokutyala yeyona nto ibalulekileyo, kuyimfuneko ukwazi iimeko eziyimfuneko ukuze umthi uphile womelele, utyatyambe ngenkuthalo, uhlale ixesha elide…
1. Iingqayi zezityalo:
Imithi ye-Bat Tien idla ngokuba neziqu ezincinci, ezikhula ixesha elide ukuphuhlisa, kodwa umthi awukho mkhulu kakhulu, ngoko akukho mfuneko yokuba nembiza enkulu. Enyanisweni, nayiphi na imbiza ingatyalwa, kodwa ukutyala njengento yokuhlobisa kufuneka ibe nembiza enhle efana ne-Bat Trang pot, i-Minh Long pot, iqinile kwaye intle, ngokuqhelekileyo sityala iimbiza ezinomhlaba, malunga ne-2-3 dm yendlela. iiglasi zilungile. Iimbiza zeTerracotta zombini zingabizi kwaye zifanelekile, zikulungele kakhulu ukukhulisa izityalo zeBat Tien. Abo banemali banokuyalela imbiza ye-enamel enegama elithi “Bat Tien Phuoc Loc Tho Toan” kunye neepatheni ezininzi ezintle kunye nemibala. Ukuba ilula, ungasebenzisa imbiza yeplastiki
Umhlaba wokukhulisa i-fairy cactus esibhozo
Into yesibini ebalulekileyo. Umhlaba kufuneka ube ne-porous, ngaphandle kodongwe, ngaphandle kwe-alum, kufuneka yomiswe ukubulala zonke iibhaktheriya kunye nezinambuzane, indlela yokurhoxisa ngokukhawuleza amanzi xa unkcenkceshela. Ngokwamaxwebhu aseThai kunye namava amagcisa amaninzi, ukubunjwa komhlaba okuthe ngqo kolu hlobo lulandelayo:
3 iinxalenye zomhlaba okanye i-alluvial.
1 inxalenye efakwe iqokobhe lamandongomane.
I-1 inxalenye efakwe iqokobhe le-coconut fiber
Iinxalenye ezi-2 zomgquba kunye nomgquba wekeyiki yeoli ecolisiweyo.
Iingxenye ezi-2 ze-rice husk ash.
Enye inxalenye yezichumisi zeekhemikhali kunye neziyobisi ezixubileyo zincinci kakhulu, njengezichumisi ze-lime, izichumisi ze-phosphate, i-anticides, njl.
Nangona kunjalo, ngokuxhomekeke kwingingqi, zininzi kwaye zingabizi, zingasetyenziselwa ukubuyisela okanye ukongeza okanye ukutshintsha izithako ngokufanelekileyo, ukuba nje umhlaba unemingxuma, ukhupha amanzi ngokukhawuleza kwaye ngokwaneleyo. Izithako ezingentla kufuneka zithengwe kwindawo enye, zixutywe kakuhle, zomiswe elangeni ukuze zibulale zonke iibhaktheriya, zingaxutywa kunye nezinambuzane kunye ne-anticides ezifana ne-BaSudin 10H, ngoku ebizwa ngokuba yi-Vibasu 10H ifom. Umhlaba obulala iintsholongwane uyimfuneko kakhulu ukuze uphephe izinambuzane, iintshulube, iinkumba, iimethi, iimbovane ezitshiza iingcambu zezityalo, ezichaphazela ukukhula kwezityalo.
2. Ukhula njani i-fairy cactus esibhozo
Ngaphambi kokubeka umhlaba ebhodweni, kuyimfuneko ukubeka uluhlu lwezitena ezincinci zamatye phantsi kwebhodwe, kodwa kufuneka libe likhulu kunomngxuma wembiza. Injongo kukukhawuleza ukukhupha amanzi emthini kwaye xa ufaka izitena, qaphela ukuba ungavumeli iingcambu zale nkwenkwezi zingene emngxunyeni wokukhupha amanzi, ukuthintela le mingxuma. Beka umxube olungisiweyo womhlaba kunye nothuthu lwerayisi ebhodweni ukuya malunga nesiqingatha sobukhulu bembiza, uze ubeke umthi weBat Tien, uwugcine ucocekile kwaye uqhubeke ukongeza izinto zokutyala, malunga ne-8/10 yeembiza zilungile. . , ukuze xa unkcenkceshela, amanzi angaphumi ngaphandle kwembiza ukuze ayenze ibe mdaka. Isanda kutyalwa kufuneka inkcenkceshelwe ukufuma okwaneleyo, kufuneka iplage ityhefu encinci, ibotshelelwe ukubamba isiqu ngokuqinileyo ukunqanda umthi ukuba ungashukumi. Imithi esanda kutyalwa kufuneka ibekwe kwindawo enomthunzi, kufuneka inkcenkceshelwe kanye ngosuku, emva kweentsuku ezimbalwa umthi uya kukhula iingcambu, uhlume, kwaye uvelise amagqabi amatsha emva koko kufuneka unkcenkceshele i-NPK 30-10-10 yesichumiso sokukhula, xuba i-10 iigram / 10 ilitha yamanzi, kanye emva kwe-7 kwiintsuku ze-10, izityalo ziya kukhula kakuhle. Ude umthi ukhule, ukunkcenkceshela kunye nokongeza isichumisi sekhemikhali i-NPK 15-30-15, ukuvuselela iintyatyambo.
3. Ukwenza imbiza:
Ukugalela iimbiza akwahlukanga kakhulu kutyalo. Emva kokutyala iminyaka emi-1 ukuya kwemi-2, umthi uyakhula ube mde kodwa ngokuthe ngcembe ube buthathaka, ucuthe iintyatyambo, kuba umthi uwutye wonke umgquba, ngoko ke wonke umthi kufuneka uncothulwe utyalwe ngokutsha okanye usiwe kwenye imbiza enkulu ukuze ilingane nobukhulu. umthi wangoku. Ukuze kufakwe imbiza okanye kutyalwe ngokutsha, umhlaba kufuneka utshintshwe kufakwe omnye omtsha, onokuthi utshintshwe ngokuyinxenye okanye ngokupheleleyo. Ukuba ufuna ukusincothula isityalo, kufuneka uthathe imela ejijekileyo ukugrumba umhlaba kufutshane nomphetho wembiza, uwususe, wuyeke umhlaba uhlukane nomphetho wembiza, emva koko uvuthulule ngobunono isityalo sonke, ujonge kufutshane. ezingcanjini, ungasebenzisa isandla sakho: wunqumle umhlaba oncanyatheliswe ezingcanjini, unqumle zonke iingcambu ezonakeleyo okanye ezifileyo, kananjalo uwathene nawaphi na amasebe amadala kakhulu, naxa athe ahluma ukuba angangeni moya, Oku kusikwa kunokutyalwa kwakhona. Tyala umthi ubuyele embizeni entsha okanye endala, kanye ngendlela eyayiyiyo ngaphambili, uyibeke kwindawo enomthunzi ixesha elithile ukuze uphile, uze uyikhuphe ngokukhawuleza kwaye uyivumele ukuba ihlale elangeni iiyure ezimbalwa. , uze usingenise, vumela isityalo siqhelane nelanga.Kungoko kuphela apho isityalo sinokushiywa elangeni ngokupheleleyo, ukuba sishiywe elangeni ngoko nangoko, umthi uya kutshisa amagqabi awo.
4. Khulisa i-fairy cactus esibhozo
Nangona xa kutyalwa imithi, sele kukho umxube wezichumisi emhlabeni, ngokuqhelekileyo izichumisi eziphilayo, kodwa xa umthi udle wonke umgquba ixesha elide, kuyimfuneko yokongeza isichumiso okanye isichumisi esongezelelweyo ukuvuselela iintyatyambo kunye nesichumisi. ikhemistri. Amalungu aphambili kwilindle zezi:
Nitrogen (N): sesona sondlo sisisiseko, izityalo zidinga iprotein eninzi ukuze zikhule, zikhule, zihlume, zihlume amagqabi, zincede izityalo ukuba zikhule kakuhle, ziqine, zityebe, amasebe amakhulu…
I-Phosphorus (P): sisichumiso sesibini esibaluleke kakhulu, sivuselela iintyatyambo ezinamandla nezikhawulezayo, iziqhamo ezikhulu, umgangatho wembewu eqinileyo, izinga lokuntshula okuphezulu….
Potassium (K): inceda izityalo ukuba zifunxe kakuhle ezinye izondlo, zivelise amagqabi amakhulu, atyebileyo, imithi eyomeleleyo, ime nkqo, ayiwi. I-Potassium yenza iintyatyambo zibe nkulu, zibe nemibala emihle kunye neentyatyambo ezihlala ixesha elide.
Namhlanje, abavelisi bezichumisi balungisa kwaye baxuba izithako ezininzi ezixubeneyo ezibizwa ngokuba zizichumisi ze-NPK kunye nezichumisi zokulandela umkhondo, ezinamagama amaninzi afana nezichumiso ezikhulayo, izichumisi ezivuselelayo, njalo njalo, ezihlala zisetyenziselwa ukuchumisa izithole.
Uhlobo lwesichumisi i-NPK 30-10-10: apho umlinganiselo we-nitrogen fertilizer ngu-30, i-phosphorus yi-10, i-potassium i-10. Olu hlobo lwesichumisi lune-nitrogen eninzi, ngoko xa unkcenkceshelwa, izityalo ziya kukhula ngokukhawuleza, zivelise ezininzi. amagqabi amagqabi, izityalo ezityebileyo, ezihlala zisetyenziselwa ukuchumisa izithole okanye imithi esanda kutyalwa.
Uhlobo lwesichumisi i-NPK 15-30-15: esi sichumisi esinomlinganiselo ophezulu we-phosphorus, onceda isityalo ukuba siqhakaze ngokukhawuleza, sibe neentyantyambo ezinkulu, kwaye sibeke iziqhamo ngokulula.
Uhlobo lwesichumisi i-NPK 10-10-30: inepesenteji ephezulu yePotassium (30) esetyenziselwa ukuchumisa izityalo eziza kuqhakaza kwaye ziqhakaze ukufumana iintyatyambo ezinkulu, iintyatyambo ezintle, iintyatyambo ezihlala ixesha elide, kwaye ngaxeshanye uncedo. izityalo ukuba zomelele, zingawi…
Ezo zezona ntlobo zintathu zisisiseko:
Uhlobo 30-10-10 : kwizithole
Uhlobo 15-30-15 : kwizityalo ezivuthiweyo
Uhlobo 10-10-30 : kwizityalo ezimalunga neentyatyambo
Nangona kunjalo, ezi zichumisi zikwayinto ephazamisayo kubalimi, oko kukuthi, kufuneka zityalwe ngexesha elifanayo lobukhulu obufanayo: apho ukutyalwa kwezithole kufuneka kulinywe nazo zonke izithole, kwiindawo apho imithi ekhulile kufuneka ikhule, yonke imithi ekhulile ityaliwe yenziwe lula ukuchumisa. Ukuba umyezo mkhulu, uhlobo ngalunye lomthi lunokudityaniswa ngokwahlukileyo. Ukuba igadi encinci ityalwe kunye nezithole zazo zonke ubukhulu, kwaye kukho imithi evuthiweyo kunye nezityalo zeentyantyambo, kunzima kakhulu ukuchumisa. Ngoko ke, abavelisi banikezela ngesichumiso sesine, i-NPK 20-20-20 apho umlinganiselo we-nitrogen, i-phosphorus, kunye ne-potassium zonke zisetyenziselwa ukuchumisa nasiphi na isigaba sesityalo, umthi uya kuhlala uluhlaza kwaye unempilo. nayo intle kwaye ihlala ixesha elide. Esi sichumiso silungile ngokwenene kwaye sifanelekile kubantu abaneegadi ezincinci.
Qaphela: indlela yokufaka isichumisi kufuneka ilungelelaniswe, ukuba uqhubeka usebenzisa isichumisi, kuya kwenza intsalela.
– Initrogen egqithisileyo iya kwenza umthi ube mbethe kakhulu, amasebe aluhlaza, amagqabi amakhulu kakhulu ukwenza umphezulu womthi ugobe, kulula ukuwa okanye ukwaphuka, kwaye utsale izitshabalalisi ezininzi, kwaye umthi uthande ukubola. Izityalo ezine-nitrogen engaphezulu kufuneka ziyeke ukunkcenkceshela i-nitrogen, kuphela amanzi ane-phosphorus kunye ne-potassium, umthi uya kuba namandla kwakhona.
– Xa kukho ukungabikho kwe-nitrogen, isityalo siya kuba buthathaka, amaqabunga amancinci, angabikho luhlaza, ngamanye amaxesha aphuzi, ukukhula okucothayo, amancinci okanye akukho ntyatyambo, kwaye umthi awunayo. Kule meko, kuyimfuneko ukunkcenkceshela isichumisi nge-nitrogen eninzi, isityalo siya kubuyela ekubeni sinzima.
§Xa kukho ubuninzi be-phosphorus, isityalo siya kudubula ngokukhawuleza, umthi uya kukhula ngokukhawuleza, umthi unamandla ngokungaqhelekanga, amaqabunga amancinci, njl., ngoko ke ukunciphisa ukunkcenkceshela kwe-phosphorus kwaye usebenzise isichumiso se-nitrogen.
– Xa i-phosphorus ingekho, amaqabunga amnyama aluhlaza, amancinci, amafutshane, anqabile kwaye anzima, abukeka engaqhelekanga, iingcambu ezibuthathaka azikwazi ukukhula, okwenza umthi ube ngumqwebedu, iintyatyambo ezincinci, akukho siqhamo, ukuba kukho, imbewu ecaba.
– Xa i-potassium eninzi, amagqabi ajika abe tyheli aze ome, isityalo siyeka ukukhula, ngamanye amaxesha sibune. Kule meko, kuyimfuneko ukuyeka ukunkcenkceshela ngezichumisi eziphezulu ze-potassium kwaye ungeze izichumisi ze-nitrogen, izityalo ziya kubuyela ngokuqhelekileyo.
– Xa izityalo zePotassium ziyeka ukukhula, amagqabi amadala aba tyheli ngokukhawuleza kwaye ome, amagqabi amancinci angabi makhulu, adityaniswe ngenxa yokungakwazi ukufunxa ezinye izichumisi, izityalo ziyabuna zife.
Imithi ye-Bat Tien idinga amanzi kakhulu, ikhule kwisiXeko saseHo Chi Minh, ngexesha elomileyo inokunkcenkceshelwa kanye ngemini ngexesha lemvula, ukunkcenkceshela iintsuku ezingama-2-3 kunokwenziwa ngokuxhomekeke kumhlaba osembizeni ngaphezulu okanye ngaphantsi. yomile kodwa ilungile ingakumbi ukuba umhlaba wembiza womile, uze uwunkcenkceshele, qho xa uwunkcenkceshela, kufuneka unkcenkceshele ngokwaneleyo, ukuze amanzi angene nzulu emazantsi embiza, kufuneka ugqobhoze imingxuma yokukhuphela amanzi ukuze amanzi agxumeke kakuhle. amanzi awami, ebangela ukubola kweengcambu. Qaphela: “Imithi eyomeleleyo kufuneka inkcenkceshelwe kakhulu, izityalo ezifuna ukunkcenkceshelwa kancinci kwaye nemithi esanda kutyalwa kufuneka ingankcenkceshelwa ngenkungu kuphela”.
6. Ukungenisa umoya:
Imithi yeBat Tien nayo idinga umoya wokuphefumla, kufuneka ityalwe phezulu kangangoko kwaye kufuneka icwangciswe ngokolandelelwano lwemithi emide ngemithi emide, imithi ephantsi ngemithi ephantsi, kwaye umgama mawube kude kancinane ukuze umoya ungene. igadi, musa ukuvumela imithi Incinci kufuneka ibe sembindini wemithi emikhulu. Kungcono ukwenza ishelufu enemigangatho emininzi, i-20 cm ubude kwaye iphantsi, i-20 cm ukusuka kwelinye.
7. Isibane sakusasa:
Imithi yeBat Tien idinga ukukhanya okuninzi ukuze ilunge, iintyatyambo ezintsha zintle, kodwa imithi esandula ukutyalwa kufuneka igcinwe kwindawo enomthunzi, xa yomelele, iya kukhutshelwa elangeni ngokuthe ngcembe. Ngexesha lonyaka elomileyo, izityalo zidla ngokudubula kakhulu kunangexesha lemvula.
Imithi yeBat Tien iyakwazi ukuziqhelanisa nobushushu bemekobume kwiSixeko saseHo Chi Minh, ezininzi izityalo zomelele kwaye zikhuthele ekudubuleni.
9. Ukuthintela izifo
Umthi we-Bat Tien kulula ukukhula kwaye awukhuselekanga kwizifo, zizifo zokungunda kuphela ezifuna ukunyangwa:
Ukuba umthi weBat Tien uhamba kwinyanga yemvula, ukuba unkcenkceshelwe kakhulu, ngakumbi ebusuku, unokubumba lula xa umanzi kakhulu. Amakhowa ahlala ebambelele kwisiseko somthi, esidala kakhulu, kukho izithole ezininzi ezincinci, ezide, ezixineneyo kwisiseko, okanye ingca ifakwe kwisiphunzi, umthi umanzi kakhulu, ngoko uvelisa i-fungi. Lo mngundo ufumaneka nakumagqabi amadala asisithekileyo ekukhanyeni kwelanga, ahlala encamathele ngaphantsi kwamagqabi, ngamanye amaxesha ajiye kwaye atye phezulu. Kule meko, ukucoca kufuneka kwenziwe, ukusika amagatsha angaphezulu, ukhula oluncinci, ukusika amaqabunga amadala. Ukuba imeko inzima, fafaza i-Aliette fungicide.
Isifo samachokoza amagqabi:
Esi sifo sixhaphake kakhulu ngamaxesha eemvula. Kumagqabi azele ngamanzi okanye awonzakeleyo, kudla ngokubakho indawo encinci emnyama, ethi ngokuthe ngcembe inwenwe kwindawo enkulu, imnyama ngaphakathi, tyheli ngaphandle, emva koko inabela kwisiqingatha segqabi, elo gqabi lijika libe tyheli libe tyheli. Ukuba amagqabi awile, kulungile, kodwa xa isasazeka kwamanye amagqabi, kufuneka itshizwe nge-insecticide ngokukhawuleza, ngaphandle koko isifo siya kusasazeka kuwo wonke umthi, onke amaqabunga aya kuchithwa, ashiye kuphela i-buds ekhangelekayo. imbi kakhulu. Unokuthintelwa ngokutshiza i-Aliette okanye i-Benlat.
Isitiya seBat Tien kufuneka sicocwe rhoqo, sicocwe, sincothule nengca engqongileyo. Ukuba indawo engqongileyo ipholile, akuyi kubakho iimbovane, izinambuzane kunye nezifo ezitshabalalisa kwaye zizise izifo, ngakumbi izityalo ezigulayo kufuneka zibekwe zodwa, kunye nemithi esanda kuthengwa kufuneka itshizwe kwaye iphathwe ngaphambi kokutyala ukuphepha ukwesaba izinambuzane kunye nezifo. kwizityalo eziphilileyo egadini.
I-Mealybugs okanye i-cotton hoppers:
Le ntwala idla ngokuvela xa kukho iimbovane, le ntwala yogqunywe ngumaleko omhlophe, onomthwebeba, ongenamanzi. Le ntwala ifunxa kwaye itye incindi yomthi, ikhupha into eswiti etyisa iimbovane, ngoko ke iintwala kunye neembovane zizinambuzane ezimbini ezisebenzisanayo. Iimbovane zibeka iintwala encotsheni yomthi, iintwala zifunxa incindi ukuze ziyitye zize zikhuphe into eswiti ekuthiwa lubisi etyisa iimbovane, ngoko ke nawuphi na umthi obona imbovane irhubuluza, kukho i- mealybug. I-Mealybugs kunzima kakhulu ukuyinyanga kuba inedyasi engenamanzi engafunxanga ziyobisi. Ukuphelisa le ntwala, kuyimfuneko ukuxuba isibulali-zinambuzane kunye nengcina efana neLanyl sulfate. I-Mealybugs inokulawulwa nge-Supracide, i-Sherpa okanye i-Trebon. Gcoba iyeza ngokucokisekileyo kwi-axils yamagqabi, ngaphantsi kwamagqabi. Ukuba ufuna ukususa i-mealybugs ngokupheleleyo, kufuneka ufefe amayeza okubulala izinambuzane afana ne-Basudin ejikeleze imbiza.
I-Thrips, ezinye izinambuzane:
Ezi ntlobo azifane zifumaneke kwimithi yeBat Tien, kwiincwadi zaseThai kukho imifanekiso ye-Thrip beetles kunye ne-Red Spider mite, ukuthintela kunye nonyango kulula ukutshiza nje izinambuzane ezifana ne: Sherpa, Trebon, Bi 58 …..
Những điều lý thú về cây xương rồng phong thủy | Hatgiongtihon.net